zimbabwe elections 2013 on News24
ARTICLES RELATING TO ZIMBABWE ELECTIONS 2013
Botswana President Ian Khama has re-affirmed his decision to not send his country's officials to participate in future SADC election observer missions.
A court in Zimbabwe has found an opposition official guilty of fraud and breaching electoral laws after he reported finding dumped ballot papers during the July general election.
An aide to Zimbabwean President Robert Mugabe says Zimbabwe would crumble if any other party came into power, according to a report.
Zimbabwean analysts say the country's economy has remained stagnant since Zanu-PF's overwhelming victory in the July elections, according to a report.
Zimbabwean President Robert Mugabe remains frustrated by the West's refusal to accept the outcome of the 31 July polls in which he emerged victorious, a report says.
300 Zanu-PF farm invaders evicted - report
At least 300 Zanu-PF supporters are reportedly homeless after Zimbabwean "armed" police allegedly demolished their makeshift homes at a farm they had "invaded" near Masvingo town.
Tsvangirai to reveal how Zanu-PF 'rigged' polls
The Movement for Democratic Change leader Morgan Tsvangirai is set to reveal to his party supporters how the 31 July elections were "stolen", a report says.
SADC queries fairness of Zim polls
The fairness of Zimbabwe's election is questionable, the Southern African Development Community says, stating that the voters' roll was distributed by the national electoral commission too late.
Aus takes 'wait and see' stance on Zim
Australia is in a "wait and see" mode over developments in Zimbabwe following recent elections, but believes the country at this stage is a "very risky place for people to invest", a report says.
A Zimbabwean man recently landed himself in trouble after he allegedly used President Robert Mugabe’s campaign material as toilet paper, a report says.
Squabbles within Zimbabwe's MDC party have reportedly intensified, with reports that the party is refusing to finance its leader Morgan Tsvangirai's trips.
A senior MDC party official has come out in the open to propose and suggest that the leader Morgan Tsvangirai should step down or risk having the Zanu-PF party rule Zimbabwe "until the cows come home".
Zimbabwe says it will no longer pursue re-engagement with Western countries until they lift their "illegal sanctions" that continue to affect the country’s economy, a report says.
Zimbabwean president Robert Mugabe has berated the US and former colonial power UK and its allies for trying to control his nation and its resources, telling them to remove their "illegal and filthy sanctions".
MDC slams 'deadwood' Mugabe cabinet
Zimbabwe’s opposition has dismissed President Robert Mugabe’s new cabinet as political "deadwood" as the veteran leader swore in new ministers after disputed elections.
Mugabe's cabinet delay 'affecting economy'
Zimbabwean analysts have criticised President Robert Mugabe's delay in announcing a new cabinet, saying the development has intensified economic stagnation.
MDC rejects SADC's 'inaccurate' report
Zimbabwe's main opposition party has criticised an African development organisation's final report that partly endorsed the country's disputed elections.
New cabinet 'a challenge for Mugabe'
Zimbabwean President Robert Mugabe is set to name his cabinet this week, with the veteran leader facing a challenge of striking a balance between the young and the old, a report says.
Zimbabwean court officials say a case against a man who allegedly intended to use an election poster of President Robert Mugabe as toilet paper has been indefinitely deferred.
Tsvangirai aide pleads not guilty
An aide to Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai has pleaded not guilty to charges arising from his reporting of election irregularities in the disputed vote won by President Robert Mugabe.